Doorashiiyinka in mar kale u musuq maasuq ka dhaco Barnaamij gaar ah. - Saafi Films Production Somali Films Hindi Af Soomaali Musalsal heeso
Dhacdo, Yaab & Barnaamij.Doorashada Soomaaliya MuuqaaloPrimary - Xulka
Doorashiiyinka in mar kale u musuq maasuq ka dhaco Barnaamij gaar ah.
Warka 09 01 2017 Musharax madaxweyne Jibriil oo kulan la qaatay baarlamaanka cusub ee...
Rajadii Jaceylka Part 99
Faaliyaha 18 02 2017 Degmada Wardhiigleey oo noqotay mool biyo degeen ah oo lagu…
FAALIYAHA QARANKA 12 01 2019 Doorashada Jubaland oo soo dhow iyo musharax Kismaayo tagi kara…
Dabagalka Wararka 27 04 2016 Farmaajo oo safka doorashada madaxnimo kasoo muuqday & M. Xasan…
Muuqaalka Muqdisho 2030 Wareysi Baazi Sh. Buzuri oo ah aqoon yahay ka fekera Muqdisho….
Yaa ku haboon in uu Soomaaliya madaxweyne kanoqdo Ra’yiga dadweynaha.
Dabagalka Wararka 07 03 2016 Nin culus oo dowlada ka baxsaday oo lasoo qabtay..
Ficil waa filin akshan ah saafi films